घरमै कति बस्नु भनेर बिराटनगर पुगेर आएका काठमाडौँका एक पुरषलाई कोरोना संक्रमण ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/घरमै कति बस्नु भनेर बिराटनगर पुगेर आएका काठमाडौँका एक पुरषलाई कोरोना संक्रमण !
घरमै कति बस्नु भनेर बिराटनगर पुगेर आएका काठमाडौँका एक पुरषलाई कोरोना संक्रमण !
काठमाडाैँ । काठमाडाैँको तारकेश्वर नगरपालिका घर भएका जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणमा तारकेश्वर नगरपालिकाका उमेर नखुलेको रूपमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले यसअघि नै काठमाडाैँमा तीन जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको भनेका मध्येका एक जना तारकेश्वरको पुरूष रहेका हुन । उनी अस्पतालको सम्पर्कमा रहेका छन । लामो समयसम्म घरमै के बस्न्ने भनेर उनी विराटनगर पुगेर काठमाडाैँ फर्किएका थिए । काठमाडाैँ उपत्यकामा मंगलबार मात्रै ८ संक्रमित थपिएका छन ।
काठमाडाैँको तारकेश्वर नगरपालिका घर भएका जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणमा तारकेश्वर नगरपालिकाका उमेर नखुलेको रूपमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृ त्यु भयो !
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, काठमाडौमा अझै एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु पर्छ